Rokkr Apk Download Ho an'ny Android | APKOLL
Te hanana sehatra hidirana amin'ny atiny fialamboly rehetra amin'ny sehatra maro ve ianao? Raha eny, dia mila mahazo Rokkr Apk ianao. Io no fampiharana Android farany, izay manolotra ny fanangonana serivisy fialamboly tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa. Mijere sarimihetsika, andian-tranonkala, fantsom-pahitalavitra, maro hafa.
Misy sehatra an-tserasera isan-karazany, izay manome fanangonana amboaram-boninkazo betsaka ho an'ny mpampiasa hiditra amin'ny fanangonana fialamboly tsara indrindra. Noho izany, eto izahay miaraka amina fampiharana mitovy amin'izany, amin'ny alalanao no ahafahanao miditra amin'ny endri-javatra mahavariana rehetra eo noho eo ary mankafy.
Inona ny Rokkr Apk?
Rokkr Apk dia rindranasa fialamboly Android, izay manolotra ny mpampiasa hiditra amin'ny fomba mora foana ny fanangonana atiny inline rehetra. Manome ny mpampiasa hijery sy hankafizany ny karazana atiny mora foana amin'ity fampiharana ity. Sehatra maimaimpoana izy io, izay manolotra ny endri-javatra sy serivisy maimaimpoana ampiasaina ho an'ireo mpampiasa.
Tsy manome haino aman-jery anatiny ho an'ny mpampiasa izany, izay midika fa tsy hahazo sarimihetsika maimaim-poana na tranomboky andian-tantara eto ianao. Noho izany, mety hieritreritra ianao hoe maninona izahay no manome sosokevitra an'ity fampiharana ity. Noho izany, misy fiasa samihafa azonao ampiasaina ao amin'ity fampiharana ity.
Noho izany, manomboka amin'ny sehatra fahatelo, izay azo alaina maimaim-poana eny an-tsena? ny IPTV App manome ny mpampiasa ny fanangonana tranomboky tsara indrindra azo alefa. Noho izany, ny sarimihetsika sy ny andian-dahatsoratra dia hita amin'ireo sehatra ireo, izay azonao ampiasaina amin'ity fampiharana ity hidirana. Manome serivisy haingana sy milamina izy io mba hidirana amin'ny fonosana.
Ireo sehatra dia manome fanangonana fonosana hafa ho an'ireo mpampiasa, izay ahazoan'ny mpampiasa mankafy ny streaming. Noho izany, azonao atao ny manampy ireo bundles miaraka amin'ity app ity amin'ny alàlan'ny fampiasana ny URL. Vantany vao ampiana ny fanangonana, dia azonao atao ny mandefa ny sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika mora azo.
Misy serivisy mitovy amin'izany ho an'ireo fiasa IPTV, ahafahanao miditra amin'ny karazana fantsona fahitalavitra rehetra. Jereo ny fantsom-pahitalavitra mivantana, amin'ny alàlan'ny fanangonana ny fanangonana fantsona IPTV tsara indrindra amin'ny Rokkr App ary ankafizo amin'ny fotoana malalaka anananao.
Fizarana samihafa no misy ahafahan'ny mpampiasa miditra mora foana amin'ny atiny rehetra misy. Afaka mahita sarimihetsika sy andian-dahatsoratra mora foana ianao amin'ny fizarana samihafa, izay ahafahanao mivezivezy azy ireo na mijery tranofiara aza. Izy io koa dia manome ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny haino aman-jery, izay manome ny fampahalalana rehetra momba azy.
Misy rafitra fikarohana ihany koa ho an'ny mpampiasa, izay manome sivana ihany koa. Noho izany dia azonao atao ny mikaroka votoaty amin'ny alàlan'ny teny fototra iray ary mampiasa ny sivana mba hahatonga azy ho marina. Manolotra angona, karazana, taona, fiteny, ary sivana maro hafa, izay ahafahanao manao fikarohana mora.
Ahoana ny fomba hanampiana fako media ao Rokkr ho an'ny Android?
Izy io dia dingana mora, fa manan-danja ho an'ity mpampiasa fampiharana ity. Mila mandefa ity rindranasa ity ianao ary mahita ny faritra mpitantana. Hita amin'ny faran'ny lisitra ankavia io. Vantany vao nosokafanao ilay faritra dia hanome famantarana fanampiny eo amin'ny Conner havanana ambony izy. Tsindrio eo amboniny ary soraty ny rohy rokkr.net na rohy HTTP hafa.
Haharitra minitra vitsivitsy ny dingana fa miasa ho anao. Rehefa vita io dingana io, dia azonao atao ny mahita mora foana ny atiny rehetra amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Misy endri-javatra mahagaga kokoa, izay azonao jerena ao. Ijju manome tranomboky fialamboly namboarina.
Anaran'ny fonosana net.rokkr.app
Hita ao amin'ny Google Play izy io, fa azonao atao koa ny misintona azy eto amin'ity pejy ity. Aza mandany fotoana amin'ny fitsidihana sehatra marobe, fa tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana eto amin'ity pejy ity ary kitiho eo aminy. Ny fisintomana dia hanomboka ho azy afaka segondra vitsy aorian'ny vita ny paompy.
Jereo ny sarimihetsika, andian-tranonkala ary fantsom-pahitalavitra
Fandefasana haingana sy haingana
Raiso ny tranombokinao
Mikoriana sy mankafy
Raha te-hanampy ny fanangonana atiny ankafizinao ianao, dia mahazoa Rokkr Apk ary ampio fehin-kevitra mifanaraka aminao. Mizotra ary mankafiza ny fotoana malalaka alefanao amin'ny fampiharana ity. Ho an'ny fampiharana sy fika mahavariana misimisy kokoa mitsidika ny tranokalanay.
Sokajy Entertainment, Apps Tags IPTV App, Rokkr Apk, Rokkr App, Rokkr Download, Rokkr Ho an'ny Android Post Fikarohana